Madaxweyne Farmaajo oo Saaka Safar u ah Itoobiya - Awdinle Online
Madaxweyne Farmaajo oo Saaka Safar u ah Itoobiya
February 07, 2020 (Awdinle Online) – Wararka naga soo gaaraya magaaladda muqdisho ayaa sheegeya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu maanta gelinka dambe u amabixi doono dalka itoobiya magaaladda addis ababa.
Ujeedada safarka madaxweynaha ayaa waxaa lagu tilmaamay in uu ka qeyb geli doono kulanka guud ee madaxweyneyaasha ururka midnimada qaaradda afrika oo 9 bishan febraayo ka dhici doona addis ababa itoobiya.
Iyadoo ay beri ku beegan tahay maalintii la doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 8 febraayo sanadkii 2017, hadana ma jiraan wax ifafaalo ah oo muujinaya in ay jiro munaasabad lagu xusayo maalintaasi, dadka siyaasada falanqeeyna ayaa siyaabo kala duwan u hadal haya sababta uu madaxweynaha isku iloowsiinaayo maalintaas, halka kuwa kalena ay sheegeynaan inaaney jirin wax u qabsoomay intii uu talada hayey, sidaas darteen uu uga gambanaayo xuska maalintii la doortay.
Awdinle.com kala soco warar sugan.
Previous articlePuntland oo xirtay xafiiskii guddiga doorashooyinka qaranka, kana mamnuucday Puntland
Next articleDowladda Federaalka ah oo Bilowday Qorshe Dagaal oo lagu Go’doominayo Jubbaland